musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Zvizhinji zveUAE Nationals mune nyowani kiyi Nzvimbo kuEmirates Airline
African Tourism Bhodhi • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • Iran Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • Marokero Kuputsa Nhau • Nepal Kuputsa Nhau • nhau • Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Pakistan Breaking News • Kuvakazve • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Sudan Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau
Iyo Emirates nyaya yakatanga muna 1985 patakatanga mashandiro nendege mbiri chete. Nhasi, isu tinobhururuka ngarava huru dzepasi rose dzeAirbus A380s neBoeing 777s, tichipa vatengi vedu kunyaradzwa kwendege dzichangoburwa uye dzakanyatso shanda-mudenga mudenga.
Emirates nhasi yazivisa mafambiro ehungwaru ehutungamiriri anofamba muWest Asia, Africa, GCC, uye Central Asia.
Nhengo nhanhatu dzechikwata dzakarongeka mumabasa ehutungamiriri, vese maAU Nationals, vachabatsira kufambisa nhanho dzendege kumisika yakakosha nechinangwa chekuvaka nzvimbo yadzo yehutungamiriri nekukudziridza hwaro hwevatengi nyika dzichienderera nekurerutsa zvirambidzo zvavo.
Ese matsva matsva anoshanda 1 Gunyana 2021.
Nei maNational Nationals ari kutora chinzvimbo chakakosha kuEmirates ?
Emirates ndeye UAE Airline yakavakirwa muAFA Emirates yeDubai.
Ese mafambiro anosanganisira tarenda reEmirati muzvinzvimbo zvakakosha zvehutungamiriri, kungave kukwidziridzwa kubva mukati mesangano kana kuburikidza nekutenderera kwenhoroondo, kuchitsigira kuzvipira kwendege mukusimudzira basa uye kufambira mberi kweayo maAUE Nyika.
Kuvaka Simba kubva mukati meiyo Emirates brand
Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline yakati:
'' Nekuda kwesimba re Emirates chiratidzo, yedu laser inotarisa pakuita zvine hungwaru vatengi uye zvekushambadzira zvirongwa, uye zvine musoro kuvaka zvakare yedu network zvichienderana nezvinowoneka kudiwa, iyo nendege yakamiswa zvakanaka munguva refu-refu kuti ibudise mhedzisiro mhedzisiro sezvatinofamba pakudzoka. Iwo mafambiro ari mukati mechikwata chezvekutengesa akaiswa munzvimbo anonyanya kusimbisa chimiro chedu chekutungamira pamisika mikuru. Tinodada nebasa rakaoma uye kuzvipira kwakatarwa neveUAE Nationals kugadzirisa matambudziko ari mumwedzi gumi nesere yapfuura, uye chiziviso chanhasi chinoratidza kuzvipira kwedu kuvaka simba rebhenji kubva mukati. ”
Emirates nyowani VP muhumambo hweSaudi Arabia
Jabr Al-Azeeby akagadzwa seMutevedzeri weMutungamiriri weHumambo hweSaudi Arabia. Jabr anga ari neEmirates kwemakore gumi nematanhatu, aimbove nebasa reManeja weNyika muUganda, Cyprus, Thailand, Pakistan, asati atora chinzvimbo chake chazvino saVice President, India, neNepal.
Emirates nyowani VP muPakistan
Mohammed Alnahari Alhashmi akasarudzwa kuve Mutevedzeri weMutungamiri wePakistan. Mohammed akabata mabasa akati wandei mukati memakore gumi nemasere ebasa rake neEmirates, kusanganisira manejimendi nzvimbo muKuwait, Indonesia, Siria, iyo UAE, uye nguva pfupi yadarika akabata chinzvimbo seMutevedzeri weMutungamiriri weMambo weSaudi Arabia.
Emirates nyowani VP muIndia neNepal
Mohammad Sarhan, aimbove mutevedzeri weMutungamiri wePakistan, achava Mutevedzeri weMutungamiri, India neNepal. Yekutanga basa raMohammad neEmirates rakauya muna2009 kuCote d'Ivoire, uye kubvira ipapo akabata mabasa mazhinji ehutungamiriri hwekutengesa muVietnam, Greece, Thailand, Myanmar, neCambodia.
Emirates nyowani Mutariri Wenyika muIran
Rashed Alfajeer, maneja weMorocco, anozove Mutariri weNyika Iran. Basa raRash neEmirates rakatanga mu2013 sechikamu cheyekutengesa maneja chirongwa chekudzidzisa. Rashed atora mamwe mabasa kubva ipapo, kusanganisira Commerce Manager Sri Lanka, Dunhu Maneja Dammam nedunhu rekumabvazuva muKSA, pamwe neMutungamiriri weNyika Tanzania.
Emirates nyowani Maneja Wenyika muMorocco
Khalfan Al Salami, Mutariri Wenyika Sudan, achava maneja weMorocco. Khalfan akapinda muchirongwa cheEmirates chekudzidzisa manejimendi muna 2015, ndokuenderera mberi nekudzidziswa kuMadrid asati atora chinzvimbo cheKomisheni maneja muKuwait. Kubva ipapo, akabata basa reManeja weNyika muSudan.
Emirates nyowani Mutariri Wenyika muSudan
Rashed Salah Al Ansari, achave Mutariri Wenyika Sudan. Rashed anga aine Emirates kubvira 2017, akabata akasiyana Commercial Support Manager mabasa muSingapore neJordani.
Alain St. Ange, Mutungamiri weAfrican Tourism Board vakorokotedza Rashed Salah Al Ansari naKhalfan Al Salami pazvinzvimbo zvavo zvitsva muMorocco neSudan. St Ange akataura chinzvimbo chakakosha cheEmirates kune Emirates kubatanidza Africa neEconomics, kunyanya kushanya nenyika.